မိမိထံရောက်လာသော အီးမေး ဘယ်ကပို့လိုက်သလဲ စုံစမ်းခြင်း
ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ အီးမေး ဘယ်နေရာကလာသလဲသိဖို့
၁။ အီးမေးကို ဖွင့်ပြီး Show original ဆိုတာကို ကလစ်လုပ်ပါ။
၂။ "Received: from" ကိုကြည့်ပါ။ IP Address ကိုတွေ့ပါမယ်။ ။
၃။ IP Address ရရင် အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း နေရာကိုရှာနိုင်ပါပြီ။
Geobytes.com/IpLocator ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ တခြားဆိုဒ်တွေလည်း ဂူဂယ်မှာ ip locator ဆိုပြီးနှိပ်ရှာလိုက်ရင်တွေ့မှာပါ။
မိမိရဲ့အီးမေး ဘယ်သူပိုင်သလဲ Findout Who Own's An Email Address ကတော့ သိပ်အသုံးမကျလှပါဘူး။ သို့သော်လည်း ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူများကတော့ စပိုင်လုပ်ပြီး ရှာခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ကုမဏ္ဍီ အီးမေးတွေကိုတော့ ပိုက်ဆံပေးလည်း မရပါဘူး။ ဂျီမေး၊ ရာဟူးမေး .. စတဲ့အလကားရတဲ့ အီးမေးတွေပဲ လိပ်စာ၊ဘယ်သူ ဆိုတာ ပိုက်ဆံပေးရှာရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ IP Address to locate: ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိသိတဲ့ အိုင်ပီးအက္ဒရက် ကိုနှိပ်လိုက်ရင် နေရာကို အလွယ်တခရှာလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံ၊ ပြည်နယ် .. စသဖြင့် ဖေါ်ပြပါတယ်။
ပိုက်ဆံပေးရင်တော့ သုံးနေတဲ့လူရဲ့ အိမ်လိပ်စာအတိအကျ ဘယ်နှစ်ထပ်၊ ဘယ်အခန်း .. ကိုသိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ဂါးဗားမင့်တွေပဲ IT Abuser များဖမ်းရာမှာ သုံးပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုဒ်ရှိကြတဲ့ခေတ်ပါ။ ခေတ်မီသူတိုင်း အီးမေးရှိကြသည် .. ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်အခြေအနေ၊ အခုတော့ Facebook, Twitter, Hi5 စတဲ့ နက်ဝပ်တွေမှာ ကိုယ်ပိုင် ၀က်ဆိုဒ်ကလေးရှိကြတယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာတွေ တင်ထားကြတယ်။ ပိုပို တင်ပြလိုသူများကတော့ Blog ဘလောက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ၀က်ဆိုဒ်ဆိုတာ ကုမ္မဏီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ သတင်းဌာနတွေရဲ့ ငွေ၊ အချိန်ကုန်ခံပြီး ကြော်ငြာ်တဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာပါ။ တစ်ချို့က ၀က်ဆိုက် တက်ကနိုလိုဂျီကို သုံးပြီး လူအများလာကြည့်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းရောင်း၊ ကြော်ငြာလုပ်ရင်း အောင်မြင်ကြီးပွားသွားကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ Yahoo, Google, Facebook, Skype, Paypal, hotmail, YouTube စတဲ့ လူအချင်းချင်းဆက်သွယ် ပြောဆို၊ ချစ်ချက်လုပ်တဲ့ စနစ်တွေပါ။
ဘာပဲဖြစ်စေ ၀က်ဆိုဒ်တခုကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်တတ်ဖို့ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ အောက်ပါအဆင့်၃ဆင့်ကို ကြည့်ပါ။
၃။ တည်ဆောက်၊ ပရိုဂရမ်လုပ်တတ်ခြင်း ..
မိတ်ဆွေများဟာ နံပါတ် (၁) အဆင့်ကို ပြောပြစရာမလိုဘူးလို့ သတ်မှတ်သလို၊ နံပါတ် (၃) အဆင့် ပရိုဖက်ရှင်နယ်ပညာကိုလည်း လေ့လာဖို့ အချိန်မရှိဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလယ်လတ်အဆင့် နံပါတ် (၂) ရေးသားတင်ပြတတ်ခြင်း အတတ်ပညာအကြောင်း ရေးပါမယ်။ နမူနာအဖြစ် ဂျိုမားလား Jomla! ဆိုတဲ့ အခမဲ့ပေးဝေတဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်အဆင့် ဘလောက်တစ်ခုကို အခြေခံ တင်ပြပါမယ်။ Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
ရေးသားတင်ပြတတ်ခြင်းမှာ နာမည်အကြီးဆုံး ၀က်ဆိုဒ်ကြီးကတော့ ၀ီကီပီဒီယာ Wikipedia ပါပဲ။ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး .. အံ့သြဘွယ်ရာ တီထွင်မှု၊ လူအများကို အခမဲ့ဗဟုသုတပေးမှု ပြုလုပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဘာသာပေါင်းများစွာနဲ့ ရေးသားကြပြီး မြန်မာဘာသာလဲပါဝင်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း အယ်ဒီတာများဖြစ်သည် ... ဆိုတဲ့ မူဝါဒနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရေးသားတင်ပြမှု များလာရင် စာရေးသူ Author - တပ်သားအဆင့်ကနေ ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပြီး နောက်ဆုံး Administrator အဆင့်တွေကို ရောက်သွားပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ .. အခုခေတ် ၀က်ဆိုက်တွေမှာ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
Joomla! ၀က်ဆိုဒ်မှာ Author တပ်သားအဆင့်က စတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာ ၀က်ဆိုဒ်မှာ Login နာမည်၊ အီးမေးထည့်လိုက်ရင် အသင်းဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ နဲနဲ ကန့်သတ်တတ်တဲ့အသင်းများကတော့ ကိုယ့်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ... စသည်တို့ကို အတင်းတောင်းတတ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်ဖြစ်သွားရင် သာမန်စာဖတ်သူအဆင့်ထက်သာသွားပါပြီ။ ရေးသားတင်ပြခွင့်ရသွားပြီပေါ့။ အချို့ဝက်ဆိုဒ်၊ ဘလောက် တွေမှာ ကွန်မင့်ပေးခြင်း (လူထုအော်သံ) အခန်းကို အသင်းဝင်ဖြစ်မှ လုပ်ခွင့်ပေးတတ်ပါတယ်။
သာမန်အသင်းဝင်များကတော့ ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာကနေ Login လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အယ်ဒီတာအဆင့်ရောက်နေတဲ့ အသင်းဝင်များအတွက် Login စာမျက်နှာ သီးသန့်ထားပါတယ်။ အောက်က စာမျက်နှအတိုင်း Username, Password, Language တွေကိုရွေးပြီး Login လုပ်ရပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ Control Panel - cPanel ကိုရောက်သွားပါမယ်။ သာမန်အသုံးချတတ်ဖို့တော့ Add New Article, Articl Manager, Front Page Manager ၃မျိုးပဲ အနည်းငယ် ရေးပြပါတယ်။ လွယ်လွယ်လေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဘလောက်ကာ လုပ်ဖူးသူများအတွက်တော့ ပိုလွယ်ကူရှင်းလင်းပါတယ်။
အောက်ပါပုံကတော့ cPanel လို့ခေါ်တဲ့ ကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့ စာမျက်နှာပါ။ အယ်ဒီတာ၊ ပါပလစ်ရှာ အဆင့်တွေပဲ မြင်ရပါတယ်။
၀က်ဆိုက်ရဲ့ Front Page Design ကိုတော့ Template ရွေးချယ်ပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်ရပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကတော့ လုပ်နေကျရှိရင် တတ်သွားမှာပါ။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Article တွေကို ဘယ်လိုတင်ပြသလဲ .ဆိုတာ ရေးပါမယ်။ အခု နမူနာ ၀က်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်ကို အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။
အထက်က ကွန်ပြူတာမှာ ပေါ်တဲ့ ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Category ဆယ်ခုကို ၀က်ဆိုဒ်ဝင်လာတဲ့လူတွေ မြင်နေရပါတယ်။
ဆောင်းပါးစာရင်း ... စသည် ကက်သီဂိုရီ ၁၀ခု တို့ကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်မစာမျက်နှာမှာ Front Page မှာပေါ်စေချင်တဲ့ Articles များကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Categories ၁၀ခုကို အောက်မှာအစဉ်လိုက် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Category တခုစီမှာပါတဲ့ Article များကိုလည်း နံပါတ်စဉ်အတိုင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အာတီကယ်၊ စာသားနဲ့ ရုပ်ပုံ မီဒီယာတွေ တင်ပြတဲ့နည်းကို ဆက်ကြပါမယ်။ Add New Article, Article Manager, Front Page Manager (၃)ခုနဲ့ အစဉ်တိုင်း စတင်ကြပါစို့။ ဒါနဲ့ မစတင်ခင်မှာ ကိုယ်တင်မဲ့ စာသား၊ ဓါတ်ပုံတွေကို ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ eZing Folder တခုဖွင့်ထားပြီး၊ Category အလိုက် Directory တွေမှာ အသင့်ထည့်ထားစေလိုပါတယ်။ အင်တာနက် ဆာဗာမှာတော့ စာသားတွေကို သက်ဆိုင်ရာ Category အောက်မှာ အော်တိုမက်တစ် ရောက်သွားပေမဲ့၊ ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ အင်တာနက် Image Folders ထဲမှထည့်စေလိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Image တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်းပိုင်တဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ဆို ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အယ်ဒီတာအများကြီးရှိတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရုပ်ပုံဖိုင်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ ထားသိုခြင်းအားဖြင့် စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းလိုက်နာလိုသူများကတော့ အများပိုင်ဝက်ဆိုဒ်မှာစနစ်တကျ ထားသို၊ လုပ်ကိုင်စေပါတယ်။
ပထမ Add New Article ကို cPanel ကနေ နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပါစာမျက်နှာကို မြင်ရပါမယ်။
၁။ စာသားများရိုက်ထည့်ရန် (သို့မဟုတ်) Paste လုပ်ရန်၊ ဖောင့်ဆိုက်ကို နံပါတ်၁၂ သုံးပါ။ မြန်မာစာဇော်ဂျီကိုသုံးပါ။
၄။ Section ကို General ရွေးပါ
၅။ Category ကို မိမဆောင်းပါးနှင့်သင့်လျှော်သလို ရွေးပါ
၆။ Author ကိုရွေးချယ်ပါ
၇။ Publish & Front Page ကိုရွေးချယ်ပါ။ Post လုပ်ရန် အချိန်မကျသေးပါက နှစ်ခုစလုံးကို No လုပ်ထားပါ။
Edit လုပ်နေဆဲကာလဖြစ်သောကြောင့် မိမိဆောင်းပါးကို သတ်ပုံ၊ သဒ္ဒါ၊ ဆင်ဆာလုပ်လိုရန် အခြားအယ်ဒီတာများကို အကူညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
၈။ နောက်ဆုံးကတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အရာကို Save လုပ်ထားပါ။ အရေးကြီးတဲ့တခုလုပ်ပြီးသွားရင် Save လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ အော်တိုဆေ့ပ် မဟုတ်တဲ့အတွက် ၁၅မိနစ်တစ်ခါ ဆေ့ပ်လုပ်စေလိုပါတယ်။
စာသားများရိုက်ထည့်ရန်နေရာမှာ ကိုယ်ဓါတ်ပုံထည့်လိုတဲ့နေရာကို Mouse နဲ့ Cursor ကိုနေရာသတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာ Left, Bottom မှာတွေရတဲ့ Image ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ပါ စာမျက်နှာအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။
၁။ Image ခလုပ်ကိုနှပ်ပါ
၂။ Internet Server တွင် သက်ဆိုင်ရာ Image Folder ကိုရွေးချယ်ပါ။
၃။ Browse ကိုနှိပ်ပြီး မိမိရုပ်ပုံကို ကွန်ပြူတာမှရွေးချယ်ပါ
ထို့နောက် Start Upload ကိုနှိပ်ပြီး အင်တာနက်ဆာဗာထံသို့ Upload လုပ်လိုက်ပါ။
၄။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မိမိရွေးထားသည့်ပုံကို ရွေးပြီးပါက Insert ကိုနှိပ်ပါ။ ရုပ်ပုံသည် စာရိုက်သည့်နေရာတွင် ပေါ်လာပါမည်။
နောက်၂ခု Article Manager နှင့် Front Page Manager ၂ခုမှာ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတင်ထားသော Article များကို အစီအစဉ် နံပါတ်ပေးခြင်း၊ အထက်အောက်နေရာရွေ့ခြင်း၊ Delete, Move folder စသည်တို့ကို Manage လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စမ်းကြည့်ပါ။ No Harm..
The End of First Lesson
ဘလောက်ကာ -- မြန်မာဘလောက်လုပ်ချင်သူများအတွက် လမ်းညွှန်
အင်တာနက်က ဒေါင်းလုတ်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ အလွယ်ဆုံးဘလောက်ဟာ http://blogspot.com ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာကနေ လွယ်ကူစွာ အခမဲ့ဘလောက်ရပါတယ်။ ညီလင်းဆက် ဆိုသူရဲ့ စေတနာ howtomakemyanmarblog.pdf ဒေါင်းလုတ်ကြည့်ရှုကြပါ။
How to Make Myanmar Blog. မြန်မာဘလော့ဂ်တစ်ခုပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်. ညီလင်းဆက် ...
ကြုံရင်တော့ လူသုံးများတဲ့ Facebook, Twitter .. စတဲ့နေရာတွေမှာ ဘလောက်လုပ်နည်း (Share Photo, Video, Infor .. ) အကြောင်းတင်ပြချင်ပါတယ်။
အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ်ဖာသာအချိန်ကုန်ခံ အတင်းလုပ်နေမဲ့အစား ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကို ယုံပြီးအပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီလူက ကိုယ်ရေးတာတွေ လိုက်ကြည့်နေမှာ စိုးရိမ်မနေပါနဲ့။ အဲဒီလူကလည်း ကိုယ်ကူညီခဲ့သူကို လိုက်ကြည့်နေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။
လောကမှာ ကူညီသူနဲ့ အကူညီခံသူ (Giver & Taker) ၂မျိုးပဲရှိပါတယ်။ ကြားလူ Give & Take လူမျိုးမရှိပါဘူ။ တကယ်တော့ Give and Take ဆိုတာ စားစကားပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများဟာ ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ငရဲ ၂မျိုးပဲ နောက်ဘ၀မှာရှိပါတယ်။ ကြားနေဘုံမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိက ဒီတကြိမ်မှာ အကူညီခံသူဖြစ်ပါစေ။ ဘလောက်လုပ်ပေးနိုင်သူကို ရိုးသားစွာအကူညီတောင်းပါ။ (တကယ်သုံးမှာသေချာရင် သူတို့က ကူညီမှာပါ)။ ကိုယ်တတ်သွားရင်တော့ နောင်တချိန် ကိုယ့်ကိုအကူညီတောင်းလာသူကို ကူညီဖို့ မမေ့ပါနဲ။ မေ့သွားရင်တော့ ကိုယ်ဟာ Taker အတန်းစားရောက်သွားပါမယ်။
Murann eZine Team